Xakamaynta Cayayaanka Iibka iyo Ijaarka dul Realtyww Info
Xakamaynta sunta cayayaanka ayaa ugu yaraan duugowda beeraha, maadaama had iyo jeer baahi loo qabo in dalagyada laga ilaaliyo cayayaanka. Si kor loogu qaado wax soo saarka cunnada, waxaa faa'iido leh in laga ilaaliyo dalagyada noocyada dhirta, iyo sidoo kale doogga dhirta ee la tartama aadanaha. Habka caadiga ahi wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee la shaqaaleeyo, maadaama ay is barbar dhig u tahay in la burburiyo haramaha iyada oo la gubo ama lagu qodayo hoostiisa, iyo in la dilo doogga waaweyn, sida digaagga iyo shimbiraha kale ee cuna abuurka. Farsamooyinka sida wareejinta dalagga, abuurka wehelka (sidoo kale loo yaqaan 'intercropping' ama abuurka isku qasan), iyo xulashada taranka beero u adkaysata cayayaanka ayaa leh taariikh dheer. Boqortooyada Midowday, ka dib markii ay soo baxday walaac ku saabsan daryeelka xoolaha, xakamaynta sunta cayayaanka iyo u nugulida sunta ayaa aasaaska u adeegsanaya cilmi nafsiga xoolaha halkii burbur. Tusaale ahaan, dawaco casaanka magaalada kaas oo dabeecadda dhul ahaaneed loo adeegsado ka dhanka ah xayawaanku, badiyaa iyadoo lala kaashanayo dawooyinka kiimikada aan waxyeelada lahayn. Meelaha miyiga ah ee Ingiriiska, isticmaalka hubka hubka loo isticmaalo xakamaynta sunta cayayaanka waa caadi. Caanooleyaashu gaar ahaan waxay caan ku yihiin xakameynta cayayaanka yar yar sida jiirka, bakaylaha iyo xeebta cirridka, sababtoo ah awoodooda hoose waxaa loo isticmaali karaa meela badan oo xaddidan sida jardiinooyinka, halkaasoo hub loo adeegsado ay tahay mid aan badbaado lahayn.